July (18) June (9) May (10) April (14) March (8) February (14) January (7) Arrimaha Bulshada Barnaamijka codka dhegeystaha Waa barnaamijka codka dhegeystaha oo todobaadkasta aad Sabtida maqashaan, dhegeystayaasha ayaana fikirkooda kaga soo dhiibta barnaamijyada raadiyaha Ergo. Waxaana isku soo duba rida Cabdulaahi Maxamed...
Bay: Ceelal laga hirgeliyay tuulooyin biyo-la'aanta darteed looga barakici jiray abaar kasta (ERGO) - Nuurto Xuseen Maxamed, waxay bil ka hor dib ugu noqotay tuulada Salbuy oo ay biyo-la’aanta ka dhalatay abaarta uga barakacday afar bilood ka hor. Dib u noqoshadeeda ayaa ka dambeys...
Baydhabo: Si looga hortago biyo la'aan ayaa toban Tuulo laga qoday ceelal Toban tuulo oo hoos taga magaalada Baydhabo ayaa laga hirgaliyey ceelal, kuwaasoo loogu talagalay in looga hortago dadku inay u barakacaan biyo la'aan.Tuulooyinka laga qodey ceelasha waxay ka mid ahaa...
Sida daaqa iyo biyaha loogu heshiiyo deegaannada uu roobka ka da'ay ee la isugu tagay (ERGO) - Roobka gu’ga ayaa ka da’aya meelo kala duwan oo Soomaaliya ah. Meelaha uu sida anaagsan uga da’ay ayay xoolo-dhaqatada abaarta ku raagay ka heleen biyo iyo daaq. Laakii...
Nin suuxay oo soo naaxay isagoo la aasi rabo (ERGO) - Cali Maxamuud Aadan (Koronto) waa 38 sano jir ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa la aasi lahaa maalin maalmaha ka mid ah isaga oo nool, laakiin suuxsan, wuxuu soo n...
Agaasimaha Fursad Fund oo sheegay in deeq-bixiyeyaasha ugu badan ay yihiin Soomaalida gudaha (ERGO) - Bishii May sanadkii hore xilligaan oo kale ayaa magaalada Muqdisho looga dhawaaqay Sanduuqa Fursadaha ee Fursad Fund. Sanduuqaan oo ujeeddaddiisu ahayd ka qeyb qaadashada kaabidda dhaqaa...
08 MAY 2017 Akhri
Wareysi ku saabsan howlaha xarunta isku duwidda howlaha bani'aadamnimo ee Soomaaliya (ERGO) - Waxaa 19-kii bishii la soo dhaafay ee Abriil laga furay magaalada Muqdisho xarunta qaran ee isku duwidda howlaha bani’aadamnimo. Xaruntan waxay hoos tagaysaa wasaaradda gargaarka i...